Adeegyada TPI - Shandong QILU Industrial & Trading Co., Ltd.
Dhalista Ball Groove Deep
Warshadaha Loo Adeegsaday
Waa Maxay Baadhitaannada Qaybta Saddexaad?
Waxaan dhamaanteen kula kulanay erayga kormeer dhinac saddexaad hal dhinac ama qaab kale. Qaarkood si fiican ayey u yaqaanaan, halka kuwa kalena ay weli su'aalo dhawr ah maskaxda ku hayaan.
Boostadani waxay bixisaa aragti dhow oo ku saabsan waxa kormeerka dhinac saddexaad ku lug leeyahay iyo shirkadaha ay ka faa'iidi karaan iyaga.
A Kormeerka , ama TPI, waa ereyga loo isticmaalo adeegyada kormeerka madax-bannaan ee madax-bannaan ee ay bixiso shirkad aqoon u leh.
Waxaa jira saddex nooc oo baaritaanno ah oo dibedda ka jira. Kormeerka xisbiga koowaad waxaa sameeya soosaarayaasha naftooda kaligood. Kormeerka kooxda labaad waxaa sameeya iibsadaha ama kooxda tayada guryaha ee iibsadayaasha.
Kormeerka dhinac saddexaad waxaa sameeya shirkad madaxbanaan, oo badanaa kiraysta iibsadaha, si loo hubiyo in dhammaan badeecadaha ay gaarsiisan yihiin heerka tayada iyo habka wax soo saarka laftiisa uu la kulmo heerarka caalamiga ah muddada nidaamka maaraynta tayada (ISO 9001), bulshada dhaqamada la aqbali karo (SA 8000) iyo maaraynta deegaanka (ISO14000).
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu weyn ee kormeerka dhinac saddexaad, marka loo eego kuwa ay sameeyeen midkood soo saaraha ama iibsadaha, ayaa ah in kormeerayaasha fulinaya TPIs labada dhinac isla markaana ay sidaas ku soo saari karaan xukun caddaalad ah oo aan wax u dhimayn danaha labada dhinac midkoodna. - iyadoo, dabcan, fiirsashada macmiilka iyo shuruudaha la soo hordhigay. Erayada fudud, go'aankooda waxaa kaliya saameyn ku yeelan doona xaqiiqooyinka adag oo labadaba kaqeybgalayaasha geedi socodka wax soo saarka waxay awoodi doonaan inay helaan sawir cad oo ah halka ay ka taagan yihiin mashruuca hadda.
Kormeerka dhinac saddexaad waxaa sida caadiga ah sameeya shirkado la aqoonsan yahay oo ISO 9001 ah, iyo AQSIQ oo shati haysta (marka shirkadda tayada gacanta ku haysaa ay adeegyadeeda ku bixiso Shiinaha) oo leh khibrad la xidhiidha, kooxo tababaran oo ku takhasusay dhawr ama dhawr qaybood oo wax soo saar ah. Doorashada bixiyaha kormeerka waa tallaabo muhiim ah oo lagu hubinayo xakameynta tayada oo dhameystiran iyadoo la daneynayo macaamilka ugu dambeeya.
Shirkadaydu ma ka faa'iideysan doontaa kormeerka dhinac saddexaad?
Shirkadaha badankood waxay tixgeliyaan kormeerka qeybta saddexaad kharash macquul ah. Waxaa fuliya shirkado leh khibrad adag, kana shaqeeya dhulka maalin kasta. Waxay bixiyaan aragti dhexdhexaad ah oo ku saabsan tayada badeecadaha waxayna u oggolaanayaan inay il gaar ah ku hayaan joogtaynta tayada ee goobta iyadoon loo baahnayn inay halkaas joogaan.
Sidan, iibsadayaashu waxay si buuxda uga warqabaan xitaa masaafada, habka wax soo saarka, waxayna dhisi karaan xiriir kalsooni leh alaab-qeybiyaha. Intaa waxaa sii dheer, in kasta oo ay ku kacayso qiimo, TPIs waxay ku dhameystaan ​​lacag adiga oo kaa caawinaya inaad iska ilaaliso khaladaadka qaaliga ah ama aad u shaqaaleyso koox QC dhexdeeda ah.
Tusaalooyinka marka loo baahan yahay kormeerka dhinac saddexaad inta badan
La shaqeynta shirkado cusub
Aqoonsiga arrimaha tayada leh waqtiga loogu talagalay
Arrimo tayo soo noqnoqday ah oo soo noqnoqday (laakiin waxaan iska ilaalin lahayn inaan gaadhno gabagabadaas oo aan kormeerno alaabada dhammaan shixnadaha, heerarka kala duwan ee habka wax soo saarka - way ka qaalisan tahay wax ka yar inta lagu xallinayo arrimaha tayada leh ee alaab-qeybiyaha alaabooyinka horay loo diray )
Iibsashada waxyaabaha qiimaha leh: elektaroniga sare, qalabka warshadaha, iwm.
Haddii aad xiiseyneyso adeegyada kormeerka qeybta saddexaad, waxaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto, waxaan ku faraxsanahay inaan ku qiimeyno!
Sida loo Nadiifiyo miridhka birta ka samaysan Carbon
Birta kaarboonku waxay leedahay codsiyo badan. Maaddaama ay tahay qalab adag waxaa loo adeegsadaa dhismaha dhismayaasha, qalabka, gawaarida iyo qalabka. Birta kaarboonku aad bay ugu nugushahay daxalashada, markaa xaalado badan biraha ayaa leh lakab miridh ah oo aan caddayn ...
Right Xuquuqda daabacaadda - 2017: Xuquuqda daabacaadu way xifdisan. - Awoodda Globalso.com